Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa 6ffaa Caamsaa dhufu filatamuuf jedhuuf paartileen kaan wayita sochii eegalan kaan ammoo socho'uuf akka rakkatan himatu.
Paartileen jajjaboodha jedhaman kanneen akka Kongiresii Federaalawaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo wantoonni adeemsa filannoorratti gufuu itti ta'an hedduun mudachaa jiraachuu himan.
Mootummaan himannaa paartilee kana bu'uura dhugaa hin qabu jechuun kuffiseera.
Qaamni filannoo gaggeessuuf aangooo fi dirqama qabu Boordiin Filannoo Biyyaalessaa gamasaatiin paartileen kunneen himatasaanii ragaan hin dhiyeessine jedha.
Dura taa'aan KFO Pirofeesar Mararaa Guddinaa boordii filannoo irrattis shakkii akka qaban ibsaa turan.
Dhaabni biyya bulchu maal jedhe?
Hoogganaan quunnamtii uummataa fi idil-addunyaa Paartii Badhaadhinaa Dr Biqilaa Hurrisaa, Itoophiyaan biyya dimokiraasiin dhibbaa dhibbattii keessatti dagaage osoo hin taane kan reefu shaakalaa jirtuudha jedhan.
• ''Kanaafuu paartileen kunneen dhuguma hojimaata dhaabsaaniitiin taa'anii murtee kanarra ga'an taanaan adeemsa dimokiraasii biyya kanaaf faayida qabeessa jedhee hin amanu'' jedhan.
• ''Paartiin karaa dimokiraasiin ulaagaa guutee galmaa'ee adeemsa dimokiraasii kanaa keessatti waan narraa eegamu nan gumaacha jedhee jiru tokko salphumatti waan akkasii murteessee uummata filannoo dhabsiisuun sirriidha jedhee hin amanu.''
• Uummanni yoo paartiin garaagaraa filannoof dhiyaate keessaa filata kan jedhan Dr Biqilaan, ''Paartilen kunneen yoo haalli rakkisaan jiraatellee dandamatanii cichanii qabsaa'uu qabu malee haaluma salphaatti keessa baane jedhanii murteessuun sirrii miti. Yoo hojimaata isaaniin taa'anii mari'atanii murteessan ta'ee sirrii jedhee hin fudhu,'' jedhan.
Paartileen siyaasaa Oromoo KFO fi ABO'n karaa ittiin dhiibbaan irra ga'e wayita ibsan, qondaaltota gameeyyii paarticha bakka bu'uun dorgomanii hanga miseensota isaanii godaatti namni hedduun akka jalaa hidhamee jiruu fi waajjiraalee muummee dabalatee waajjiroonni isaanii akka jalaa cufamanii jiran, darbees bilisummaan socho'anii filannoof qophaa'uu akka hin dandeenye irra deddeebiin dubbataa turan.
Kanarratti yaada kan kennan Dr Biqilaa Hurrisaa, himannaan kun kan bu'uura hin qabneedha jedhan.
• ''Himannaasaanii kana bakka walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa paartilee walitti qabanitti dhagahuuf carraa argadheen ture. Namoonni himatan kunneen eenyu, eessatti, eenyuun akka hidhame, waajjira aanaa kam keessa jirutu cufame? jedhamanii gaafatamanii qulqullinaan ibsuu dadhaban'' jedhan.
Paartileen filannoo keessaa ba'uun mootummaa hin yaaddessuu?
Sirna dimokiraasii paartilee hedduu keessummeessu keessatti akkuma paartileen dabalamaa deeman uummanni filannoo hedduu argataa deema jedhan Dr Biqilaa Hurrisaa.
• ''Paartileen kunneen dhuguma filannoo keessaa ba'uuf murteessaniiru yoo ta'e, uummata filannoo dhabsiisaniiru jechuudha, waan uummatasaanii hin fayyadne hojjetaniiru''
• ''Garuu paartileen kunneen qofa miti kan galmaa'anii jiran. Itoophiyaa keessaa paartileen 53 galmaa'anii akka jiran quban qaba. Kanaafuu uummanni filannoo dabalataa dhaba yoo ta'erraan kan hafe gonkuma waan filatu dhaba jedhee hin yaadu.''
• ''Himannaan akkasii sirnicha maqaa xureessuuf yoo ta'e malee dhugaarratti kan hundaa'e miti'' kan jedhan Dr Biqilaan, inumaa bakka tokko tokkotti namoonni yakka hojjetanii yoo qabaman ''sababan miseensa paartii kanaa ta'eefan qabame waan jedhaniif, poolisoonni rakkoo dhufu kana sodaa gadi dhiisaa turan,'' jedhan.
• Sirni dimokiraasii biyya kanaa kan qulqullaa'ee guutuu ta'e miti kan jedhan Dr Biqilaan, ''yoo rakkoon jiraate mootummaa biyya bulchu waliin walta'uun sirreessuuf qabsaa'uudha malee siyaasa walkomachuufi maqaa walballeessutiin furmaati dhufu hin jiru,'' jedhan.
• Paartileen kunneen ''barumaan dhiibameen ba'e jedhanii komachuurra deggertootasaanii kabajanii filannoo ta'uufii qabu'' jedhan.
Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa
"Hanga beellama mana murtii hin qabaannetti sababiin ittiin mana hidhaa turaniif hin jiraatu" Aadde Birtukaan Miidhaksaa
"Lubbuu miseensotaafi lammilee keenyaa miidhamuuf mootummaan itti gaafatamummaa fudhata." KFO
Aanga'oonni Kongrasii Federaalawaa Oromoo (KFO)fi Paartiin Dimokraasii Dhugaaf haala qabatamaa amma jiruun gara filannootti seenuun nu yaaddeessa jedhan.
Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad, waggoota lamaafi walakkaa darbanitti TPLF walitti bu'insi amantaa fi sabummaa irratti xiyyeeffatan 113 akka uumaman gochaa ture jechuun himatan.